दिपीकासँग रोमान्स गर्ने को, भारतका सुचान्त कि नेपालका नाजिर ? (भिडियो) « Mazzako Online
दिपीकासँग रोमान्स गर्ने को, भारतका सुचान्त कि नेपालका नाजिर ? (भिडियो)
चलचित्र ‘तिमीसँगै हुने मन छ’ मा नाजिर हुसेन नायकको रुपमा अनुबन्धित भएका छन् । यसअघि सिनेमाका लागि भारतीय कलाकार रोहित सुचान्ती र नायिका दीपीका प्रसाई फाईनल भईसकेका छन् । यो सिनेमामा पल शाह र निराजन प्रधानको नाम आएको थियो तर नाजिरलाई सिनेमाको लागि साईन गराईएको छ । म्युजिक भिडियोको काममा ब्यस्त नाजिरले केही दिन अघि मात्रै यो सिनेमा साईन गरेका हुन् ।
उनले केही अघि चिलगाडी र हुतुतुमा पनि साईन गरेका छन् । ब्यस्त स्क्याजुलका बिच नाजिरले ‘तिमीसँगै हुने मन छ’ का लागि टाईम निकालेका छन्, यो सिनेमाले चैत्रको पहिलो साताबाट फ्लोरमा जाने बताईएको छ । सिनेमामा नाजिरको भुमिका निकै राम्रो रहेको बुझिएको छ ।
यो चलचित्रलाई दिपीकाका श्रीमान्, निर्देशक दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गर्दैछन् । चलचित्रका अन्य कलाकारहरुको भने केही दिनमा फाईनलग रिने भनेर निर्माण टिमले जानकारी गराएको छ ।
लभ स्टोरी जनरामा निर्माण हुने यो सिनेमाका लागि टेक्निकल टिम निर्माण युनिटले भारतबाटै झिकाँउदैछ । यो सिनेमालाई भारतमा पनि प्रर्दशनको तयारी गर्ने भनेर चलचित्रका निर्देशक बताउछन् । ओम नव सिवाय प्रोडक्सनको ब्यानरमा यो सिनेमा बन्नेछ ।